नेपाली मेला : नेपाली संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रियकरण
मनोज घर्तीमगर -
कतार एयरवेजनको विमान नं. क्यूआर ००५ अगस्ट २५ राति ९ः३५ बजे हिथ्रु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुँदा हामीले संयुक्त अधिराज्य बेलायतको भूमि टेकिसकेका थियौँ । प्रतिक्षा २७ अगस्टमा केम्पटन पार्कमा आयोजना हुने नेपाली मेला–२०१७ को थियो ।
२७ अगस्ट बिहान मेलास्थल केम्पटन पार्कको प्रवेशद्वारमा छिर्दै गर्दा मैले माघ १५को काठमाडौंको टुँडीखेल सम्झिएँ । १५ माघ तमु समुदायको महान् चाड तमु ल्होछार हो । जुन दिन काठमाडौंको टुँडीखेलमा ठूलो कल्चरल इभेन्ट हुन्छ, नेपालकै नमूनाको रुपमा । तर त्यहाँ तमू समुदायको संस्कृतिमात्रै झल्कन्छ । बाँकी पुगेका हुन्छन्, मात्रै रमाईलोको लागि ।
यो केम्पटन पार्कमा कसकसको संस्कृति झल्किएला त ? मनको प्रश्नलाई मनभित्रै राखेर एक फन्को मारेँ । बेलायती भूमी –भौगोलिक रुपमा नेपाल भन्दा टाढा, धेरै टाढा ।
देशले रगत माग मलाई बली चढाऊ
गोपाल योञ्जनको देशभक्तिपूर्ण गीत केम्पटन पार्कमो गुञ्जियो । थुप्रै देशभक्तिपूर्ण नेपाली गीतहरु गुञ्जिए । मानौ म नेपाली भूमिमा छु –आभाष यस्तै गरायो ।
निलो आकाश । त्यसैले घाम टन्टलापुर हुँदै गयो । यो ‘मौसमले पनि साथ दियो’ भन्ने शुभसंकेत थियो । दौरा सुरुवाल, कछाद भांग्रा लगाएका पुरुषहरु, चौबन्दी चोली, पटुका, लुंगी र घलेक, साडी लगाएका महिलाहरुको विस्तारै प्रवेश हुन थाल्यो । पोषाक लगाएर मात्रै होइन, साथमा हलो जुवा, ढिकी, डोको, घुम बोकेर । नेपाली झण्डा फहराउँदै । नेपाली बाजाहरु बजाउँदै । एकातिर बहुजातीय, बहुभाषिक, बहु धार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त संस्कृति झल्कने प्रस्तुती हुन थाले, झाँकी प्रदर्शनीको रुपमा । अर्कोतिर चना चटपटे, पानी पुरीदेखि ममका परिवारसम्मका खानाका परिवार स्टलमा ठूलो भिडभाड देखिन थाल्यो । निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो मान्नुपर्ने भएन –यो त मिनी नेपाल हो । लण्डनमा देखिएको मिनी नेपाल ।
नेपालको विविधतायुक्त संस्कार संस्कृति, रितिरिवाज, चालचलन, परम्पराको सुन्दर समायोजन थियो नेपाली मेला । यसले विविधतामा रहेको नेपालीलाई एकतामा बाँध्यो । बेलायतमा रहेका नेपालीहरुलाई त एकतामा बाँध्यो नै नेपालमा रहेको नेपालीहरुलाई पनि एकतामा बाँधिन सिकायो । नेपाली संस्कृतिको संरक्षण, संबद्र्धन र प्रवद्र्धनमा यसको योगदानको कसैसँग तुलना गर्न नसकिएला । बेलायतमा रहेका नेपाली युवा पुस्तालाई यो मेला नेपाली संस्कार संस्कृति सिकाउने ठूलो पाठशाला बनेको छ ।
जब युवाहरु नेपाली गीत संगितमा कम्मर मर्काउन थाले, त्यो पनि नेपाली मौलिक पोषाक लगाएर । पक्कै उनीहरुलाई ठूलो बोध भएको हुनुपर्छ –मेरो अशली संस्कृति यो हो । मेला आयोजनामा जुन पुस्ता भरमग्दुर लागिरहेको छ –यसले एउटा सन्देश दिएको छ, ‘यो भावि पुस्तालाई आफ्नो संस्कार संस्कृति सिकाउने एउटा कर्तव्य पनि पूरा भईरहेको छ ।’
विश्वकै जुनसुकै कुनामा गएर, जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नेपालीले सगौरव भन्न सक्ने एउटा वाक्य हो, ‘हामी नेपाली धर्म, संस्कार, संस्कृतिमा विश्वमै धनी छौँ ।’ नेपाली मेलाको नवौँ संस्करणसम्म आउँदा यसले नेपाली संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ ।
पहिलो, लन्डनमा आयोजित मेलामा दशौँ हजार नेपालीहरुले विविधतायुक्त संस्कृति झल्काएका छन् । कुनै समय आधा विश्व कब्जा गरेको बेलायतको राजधानी लण्डनमा हुने यो कार्यक्रमले विश्वलाई नै सन्देश दिएको छ । दोस्रो यो कार्यक्रममा २८ मुलुकका कुटनीतिक प्रतिनिधि सहभागी भएर अवलोकन गरेका छन् । यसअर्थ पनि मेलाको सफलतासँगै नेपाली संस्कृति अन्तर्राष्ट्रियकरण भएकोमा बेलायतमा रहेका नेपालीले मात्रै होइन नेपाल र विश्वभर रहेका नेपालीहरुले गौरव गर्नुपर्दछ ।
नेपाल सरकार स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन, प्रदेश र संघको निर्वाचन माघ ७ भित्रै सम्पन्न गरी संविधानको पूर्ण कायान्वयनको राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्दैछ । केहीं महिना अघि निम्तिएको प्राकृतिक प्रकोपको सामना गरिरहेको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा छ, छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन तल्लीन छ । र, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणसहितको आर्थिक समृद्धिको खाका तयार पारिरहेको छ । नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ भनेर कोही मन्त्रीलाई सोध्यो भने यस्तै जवाफ आउला ।
तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरुले के गरिरहेका छन् भन्ने उसलाई उति सारो चासो छैन । नेपाली मेलाको उद्घाटन समारोहमा गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. शेष घलेले नेपालका बाढी पहिरो पीडितलाई राहत बाँड्दाको प्रसँग उठाउँदै भने की ‘राहत वितरणको सिस्टम छैन, विपतको पूर्व तयारी छैन । राहत दिन चाहानेका लागि समन्वय गर्ने संयन्त्र छैन । हामी वास्तविक पीडित चिन्न सक्दैनौँ ।’ देशमा ठूलठूला पिपद र अन्य समस्या पर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरु जति देशलाई सहयोग गर्न चाहान्छन्, तयार हुन्छन् । तर, देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुप्रति उति सारो चिन्ता गर्दैन की भन्ने एउटा सन्देश थियो घलेको भनाई ।
सरकारले अब आफ्नो प्राथमिकतामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुसँग सिप, ज्ञानमात्रै छैन, आर्थिक स्रोत पनि छ । त्यसको उच्चतम प्रयोग गरेर नेपाललाई द्रुत गतिमा समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन त सकिन्छ नै । अर्को कुरा आर्थिक समृद्धिमात्रै देशको समृद्धि होइन, हाम्रो संस्कार संस्कृति, भाषाको विस्तार पनि समृद्धि हो । नेपाली कला संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर देशलाई समृद्ध कसैले बनाइराखेको छ भने त्यो विदेशमा रहेका नेपालीहरुले नै गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरुले स्वीकार गर्नुपर्दछ ।
नेपाली मेलाले जुन उचाई हाँसिल गरेको छ, यसको उचाईलाई बढाउन नेपाल सरकारले नै कार्यक्रम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्नु नेपाल सरकारको मुख्य दायित्व हो । एकैपटक नेपाल सरकारको पूर्ण योजना तत्काललाई सम्भव देखिदैन, दूतावासमार्फत भईरहेको औपचारिक सहकार्यको उचाईलाई उठाएर परिणाममुखी सहकार्य बनाउन जरुरी छ । यसका लागि मेलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वको खाँचो देखिन्छ ।
साथै, मिनी नेपाल देखाउने मेलालाई अझै भव्य बनाउन यसको आयोजना पक्षलाई अझै फराकिलो बनाउँदा राम्रो हुने देखिन्छ । र, जसरी काठमाडौंको टुँडीखेलमा तमु ल्होछार हुँदा गैर तमुहरुको असंख्य उपस्थिति हुन्छ, यो नेपाली मेलामा गैर नेपालीहरुको असंख्य उपस्थितिको वातावरण बनाउनतर्फ बेलामा ध्यान दिनु पर्दछ । मेला आयोजनाका लागि तमुधिं यूकेले गरेको व्यवस्थापन साँच्चीकै उत्कृष्ट थियो । दशौं संस्करण झनै भव्य होस् ।